Home ngwaahịa DataNumen Outlook Repair Igbe Mbata Ngwaọrụ Nguzo
Igbe Mbata Ngwaọrụ Ntanye Nkwụdo Mgbe Rerụzi faịlụ PST mebiri emebi ma ọ bụ mebiri emebi
Mgbe ị na-eji Ngwá Ọrụ Mmezi Outlook Inbox (Scanpst.exe) rụzie faịlụ folda nke onwe (PST) nke mebiri emebi ma ọ bụ nke rụrụ arụ, kama ịrụ ọrụ nrụzi ahụ, ngwa ahụ kwụgidere na-adịghị agwụ agwụ ma ghara ịzaghachi iwu onye ọrụ. Ọ bụrụ na ị mepee Windows Task Manager, ị ga-ahụ ọkwa nke ngwa ahụ bụ "Ọ naghị azaghachi". Ọ bụrụ na ị mechie ngwa ahụ n'ụzọ na-adịghị mma ma restart it to re-rụkwaa otu faịlụ ahụ, ị ​​ga-enweta otu ihe ahụ mgbe niile.
Nrụrụ aka ma ọ bụ mmebi nke faịlụ PST dị arọ nke ukwuu. Mgbe Igbe Mmezi Igbe (Scanpst) na-agba mbọ idozi faịlụ ahụ, ọ ga-abanye n'ime loops nwụrụ anwụ na-adịghị agwụ agwụ ma enweghị ike ịrụzi faịlụ ahụ ọzọ.
Ikwesiri iji DataNumen Outlook Repair ịrụkwa faịlụ PST rụrụ arụ. Site na usoro ihe omimi na usoro algorithm, DataNumen Outlook Repair ga-agbake mgbe niile most nke recoverable data na-etolite ihe rụrụ arụ PST faịlụ, ya mere ọ bụ ihe kacha mma Outlook mgbake ngwá ọrụ na ahịa.